Horumarinta - Block Block - Magaalada Lancaster, Qorshaha Istaraatiijiyada ee PA
2020 Gobolka Cinwaanka Magaalada
Duqa Magaalada Sorace ayaa siiyay cinwaanka Magaalada ee 2020 cinwaanka Talaadada, Janaayo 28-keeda Xarunta Ware ee ku taal magaalada hoose ee Lancaster. Soojeedinta ayaa si toos ah loogula socodsiiyay, lagana heli karo hoos ka daawo.
Hoos waxaa ku qoran qoraalka Duqa Magaalada Sorace ee 2019 ee cinwaanka Magaalada, laga soo bilaabo Talaadada, Janaayo 22, 2019. Fiid wanaagsan. Waad ku mahadsantahay inaad timaaddo Gobolka ugu horeeyay ee Cinwaanka Magaalada. Caawa, waxaan jeclaan lahaa in aan soo galo magaaladeena kaddib markaan dhameysto sanadkeyga ugu horeeya ee Duqa .... akhri faahfaahin →
Fikrad ka socota dukaanka Sorace
Qorshahan Istaraatiijiga ah wuxuu diiradda saarayaa dadka magaalada Lancaster iyo shaqada aasaasiga ah ee Dawladda Magaalada. Qaadashada afartanka mudnaanta ee maamulkayga, qorshahani wuxuu hubin doonaa xaafadaha adag, waddooyinka nabdoon, dakhliga sugan, iyo xukuumada muuqata inay ka badan tahay ereyada. Waxaan ka shaqeyneynaa dhamaan qaybaha, iyaga oo isticmaalaya xogta si wax-ku-ool ah, wadashaqeyn ... akhri faahfaahin →